Rita, Writing for My Sake!: မမ နှင့် ဆက်စပ်ရာ
Posted by Rita at 11/09/2010 08:38:00 PM
မူ/လယ်/အထက်တန်းက သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်း သတိရမိတယ်။
လမ်းထဲက အတန်းတူကောင်ဆို အိမ်အလုပ် တအားကူရတဲ့ကြားက ဝိုင်အိုင်တီ ဝင်အောင်ကြိုးစားတယ်။ အဲ့မှာလည်း ဟော့တဲ့ မေဂျာရဖို့ ၂ တန်းထိ အသေကြိုးစားတယ်။ အဲဒီတုံးက EC နဲ့ Civil တစ်နှစ်စီ အမှတ်မြင့်နေတာ..။ သူ အီးစီရပြီး ၃ တန်းကစလို့ စာမလုပ်တော့တာ အောင်စာရင်းက သူ့နာမည်အောက် ပါမောက္ခလက်မှတ်ပဲ ရှိတော့တယ်တဲ့။
ကျောင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်က အိမ်လက်ရှိစီးပွားရေးလဲ မလုပ်ပဲ ဘယ်လိုမှမမျှော်လင့်တဲ့အလုပ်၊ ပိုက်ဆံတွေတော့ အရမ်းချမ်းသာလာပါတယ်။
ကိုယ်ရတဲ့ဘွဲ့နဲ့ လုပ်တဲ့အလုပ် တခြားစီဖြစ်နေတဲ့လူတွေ အတော်များများတွေ့ဖူးတယ်။
သူကျတော့ ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လား၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်လား..၊ ဘယ်လိုကောက်ချက်ချရမလဲမသိဘူး။
အကောင်းဆုံးထင်တဲ့အရာတွေ ရအောင်ကြိုးစားရင်း လမ်းတွေလဲ လွဲ...
ကျောင်းကပညာနဲ့ လုပ်မစားဘူးဆိုတဲ့လူတွေက သပ်သပ်ကိုရှိတာ မမစင်။ သူငယ်ချင်းက အဲလိုလူမျိုး။ ကျောင်းမှာပညာသင်တာ သူတို့အတွက် ထမင်းစားရေသောက်လို့ ပြောရမလား။
ထမင်းစားရေသောက်ဆိုတာ လူတိုင်းသိတဲ့ သိပ်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်မျိုး ပြောချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မို့လုပ်ရတာလို့ ပြောရမယ် ထင်တယ်။
မမစင် သူငယ်ချင်းလဲ ၃ တန်းရောက်မှ သူ့ဘာသာ နားလည်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ။ အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ ပိုက်ဆံကို ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဘာသာ တကယ်ကျေနပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့။
(တခုခုကိုရအောင် ကြိုးစားဖို့ ကာယကံရှင်မှာ အဲဒီအရာနဲ့ပတ်သတ်လို့ တန်ဖိုးထားစိတ်နဲ့ ယုံကြည်စိတ် ရှိဖို့လိုတယ်။) - မဖြစ်မနေလုပ်ရတော့မယ့်အလုပ်တွေမှာ ဒီလိုစိတ်တွေရှိမှ လုပ်မယ်ဆိုတာဟာ အကြောင်းပြချက်သက်၂လို့ ထင်ပါတယ် (ပျင်းလို့ မလုပ်ချင်လို့)။
(သူငယ်ချင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးနားက တက္ကသိုလ် ၂ ခုကို ကြိုက်တာရွေးတက်လို့ရရက်နဲ့ ဘာကျောင်းမှ ဆက်မတက်တော့တဲ့တစ်ယောက်ကို မှားလိုက်လေလို့ ခုချိန်ထိ မထင်ဘူး။) -ကိုယ်လဲမှားတယ်လို့ မထင်ဘူး သူဟာ ဘာမှ မရလို့ (သို့) ရအောင်လုပ်ချင်စိတ်ကို မရှိဘူးဆိုတဲ့ လူတွေထက်သာတယ်။ မဖြစ်မနေလုပ်ရတော့မယ့်အလုပ်ကို (ဥပမာ ၁၀တန်း ဆိုပါတော့) ထူး၂ချွန်၂ ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်၊ ပြီ:မှ သူယုံကြည်ရာ သူရွေးချယ်တယ်။ ဒီလူ ၂မျိုးက မတူဘူး။ ကျောင်းသားဟာ စာကျက်ဖို့ပဲရှိတယ်။ ၁လုပ်ထဲသောအလုပ်ကို ဖြစ်ထွန်းအောင် မလုပ်နိုင်ရင် ကိုယ့်အတွက်တော့ အဲဒီသူ ညံ့လို့ပဲ (ညဏ်မမီတာ နေမကောင်းတာ စည်းပွါးရေး မပြေလည်တာတွေ မရှိဟု ယူဆပါ) ကိုယ့်အတွက်တော့ ကိုယ်လုပ်နေတာ၊ ကိုယ်လုပ်ကို လုပ်ရမယ့် အရာတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပဲ။ တော်အောင်ကြိုးစားတယ် ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ (ရီတာရဲ့ ကိုကိုလိုပေါ့)
ရှိတဲ့အချိန်တုန်းက မီးကုန်ယမ်းကုန်မကြိုးစားခဲ့ လို့ တချိန်ချိန်မှာ နောင်တ (သို့) စိတ်ကသိကအောက်လေးတောင်မှ ရမှာ မလိုလားဘူး။မလိုချင်ဘူး။ ကြိုးစားတယ် ဒါပေမဲ့ မြော်လင့်သလောက် မရလဲကျေနပ်တယ် ကိုယ့်ဘာသာ တာဝန်ကျေတယ်လို့ ယူဆတယ်။
(ကိုယ်ရတဲ့ဘွဲ့နဲ့ လုပ်တဲ့အလုပ် တခြားစီဖြစ်နေတဲ့လူတွေ အတော်များများတွေ့ဖူးတယ်။ သူကျတော့ ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လား၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်လား..၊) - စိတ်ဆိုတာ ဖန်တီးယူလို့ရတယ်။ ထမင်းစားရမှာ စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့လူ ရှိလား? ရှိရင်ကော မစားပဲနေလို့ရလား? မစားရင်ရော ဘယ်နှစ်ရက်နေမှာလဲ? အလုပ်တိုင်းဟာ ဆက်စပ်နေတယ်၊ အနဲဆုံးအခြေခံပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ကိုယ့်အတွက်တော့ လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်တိုင်းကို ဝါသနာပါတယ်၊ ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဒီတော့လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်တိုင်းကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ (တီဇက်အေ ဘလောက်မာ မဟုတ်၍ အတည်ပြောသွားသည်)
ဒီနေရာမှာ ကိုကို ပြောတာတွေနဲ့ ထည့်ပြောရမှာ။ ဒါမှ ပြည့်စုံမှာ။ ဒါပေမဲ့ ထည့်မရေးဖြစ်လိုက်ဘူး။ တော်သေးတာက ခရေဖြူ ဟိုနေ့ကမှ အဲဒီဇာတ်လမ်းဖတ်ပြီးသွားတော့ အဲဒါနဲ့ ချိတ်ဆက်တွေးလိုက်မိတာ။
ကိုကို့ စကားလုံးတွေထည့်လိုက်မှ ဒီ post မှာ ပြည့်စုံမှာပဲ။
ဒီမှာကတော့ တခုခုကို discuss လုပ်ဖို့ဆိုတာထက် တခုခုကို တင်ပြရုံလေးပဲ ရေးလိုက်တာဆိုတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မထည့်လိုက်ဘူး။
ကိုယ်ဘာလုပ်နေသလဲ ကိုယ့်ဘာသာ သေချာအောင် သိနေတဲ့ လူတွေအကြောင်းကိုတော့ တနေ့နေ့မှာ ကြိုးစားပြီး ရေးကြည့်ဦးမယ်။
(ခုန ပိုနေတဲ့ ကွန်မန့်တချို့ဖျက်တာ ခရေဖြူ့ ကွန်မန့်ပါ မှားဖျက်လိုက်မိလို့ email ထဲကနေ ပြန်တင်လိုက်တယ်)
ဆန္ဒရှိပြီဆိုရင် နည်းလမ်းကို သူများက လာပေးဖို့ မလိုဘူး။ ဆန္ဒရှိတဲ့သူအဖို့ သူလိုချင်တာရဖို့ နည်းလမ်းကို သူ့ဘာသာ မရ, ရအောင်ရှာတယ်။ အခြေအနေကိုလည်း သူ့ဘာသာ မရ, ရအောင်ဖန်တီးတယ်။
Most prudent persons applied their selves.
They became physically and mentally rich.
They interpreted the principle of related subject which they applied.
They knew the basic processes common type of subject.(Not necessary to beatechnical expert)
Bearing in mind....
Competence has at least3components.
3.Attitudes (ethical or integrity)